Mgbidi | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Tapestry bụ akwụkwọ nchekwa dị n'ịntanetị dị mma iji dekọọ foto, nyocha na nkwupụta, n'usoro usoro ọmụmụ afọ nke Early Years, iji wulite ndekọ nke ahụmịhe nwa gị n'oge ha na anyị nọ. Usoro a na-enye anyị ohere isoro ndị nne na nna na ndị nlekọta na-arụ ọrụ iji kesaa ozi na ịdekọ egwu ụmụaka na mmụta na na mpụga klaasị.
Kedu adreesị weebụsaịtị nke Tapestry?
Kedu ka Tapestry si arụ ọrụ?
Tapestry na-enye nwata ọ bụla akwụkwọ akụkọ nke aka ha nwere n'ịntanetị. A na-enye ndị nne na nna na ndị nlekọta ndenye aha ha site na iji ozi-e na okwuntughe ha (nke anyị doziri tupu anyị mana ị nwere ike ịgbanwe ya iji mee ka ọ nwekwuo nchebe). A na - enye ndị ọrụ nkuzi anyị niile ohere ịbanye. Ha nwere ike bulite nyocha, foto ma ọ bụ vidiyo; idekọ ihe ụmụaka rụzuru na ịtụle mmụta ha. Ndị nne na nna nwere ike ịgbanwe ntọala ha ka e wee mepụta email na-akpaghị aka na-agwa ha mgbe agbakwunyere nyocha ka ha wee nwee ike lelee ma tinye nkọwa ọ bụla nke ha.
Nye nwere ike ịnweta Tapestry?
Dị ka ndị nne na nna / ndị nlekọta ị nwere ike ịnweta Tapestry site na ime ka anyị mara adreesị ozi-e ọ bụla ịchọrọ ijikọ na sistemụ (ejedebe na 2 maka nwa ọ bụla).
Ndị ikwu ndị ọzọ enwere ike isonye na Tapestry?
Nwere ike ịhọrọ ịkọkọrịta akụkọ gị na ezinụlọ zuru ezu ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ya mere ha nwere ike ịhụ akwụkwọ ịmụ akwụkwọ nke nwa gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ iji wuchaa a Tapestry ikike Ileghara ma weghachiri ya Ọfịs Schoollọ Akwụkwọ. Mgbe ahụ, anyị ga-emepụta akaụntụ Tapestry maka gị ma zitere gị ozi email nwere ntuziaka na ịmegharị akaụntụ gị n'ịntanetị, ịmepụta paswọọdụ na ịtọlite ​​ohere PIN. Ọ bụrụ n’ịnabataghị email ahụ n’ime awa 48, biko tụlee folda ‘Junk mail’ gị tupu ị kpọtụrụ Office ahụ.
Ozugbo ị rụọ ọrụ akaụntụ gị, ị ga-enwe ike ịnweta ya na kọmputa gị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere iPhone / iPad biko gaa na ụlọ ahịa iTunes wee budata ngwa Tapestry site na ngalaba Mmụta (chọọ Tapestry Mobile). Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo / Mbadamba ụrọ, chọọ akwụkwọ akụkọ Tapestry Learning na Google Play Store wee budata.
Banye site na iji adreesị ozi-e gị na paswọọdụ emepụtara na mbụ.
Kedu ihe PIN na-edobe?
Mgbe inwetara Tapestry site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba, biko tọọ PIN pụrụ iche mgbe ị banyere na nke mbụ. A ga-achọ ihe a mgbe ọ bụla ị laghachiri na ngwa ahụ ma ọ bụ mgbe ihuenyo kpochiri.
Kedu ka m ga-esi gbanwee ntọala m na kọmputa?
N'elu aka nri nke ihuenyo gi ị ga-ahu aha gi, ma ịhọrọ nke a ga - enye gi nhọrọ 'Dezie Mmasị'. Họrọ nhọrọ a ma gosipụta gị na ihuenyo na-enye gị nhọrọ iji gbanwee adreesị ozi-e na paswọọdụ gị. Also nwekwara nhọrọ ịnata ozi-e mgbe ọ bụla agbakwunyere ọhụụ ọhụụ na Journal of Learning gị - naanị pịa ma ọ bụ tọọ igbe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ntọala a.
Kedu ka m ga-esi gbanwee ntọala m na iPhone / iPad / Android?
Iji gbanwee ntọala gị na ngwa iPhone / iPad, pịa bọtịnụ 'gia' n'akụkụ aka nri nke ngwa ahụ. Nke a na - enyere gị aka ịgbanwe paswọọdụ na / ma ọ bụ adreesị ozi-e.
Kedu ka m ga-esi lee akwụkwọ ịmụ akwụkwọ nke nwa m?
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ ihe nwatakịrị gị kwuru na ihuenyo gị na ndepụta - ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a ga-emepe emepe ka ị wee lelee. Nwere ike ịgbakwunye nkọwa dị na igbe dị na nyocha ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ - ọ ga-amasị anyị ịnweta ụdị nkwupụta ahụ!
Kedu ka m ga - esi tinye ntinye na Journal Journal nke nwa m?
Họrọ nhọrọ 'Add Observation' (ma ọ bụ akara ngosi 'gbakwunyere' na iPhone / iPad / gam akporo) ma gbakwunye ozi dị mkpa na igbe ndị dị na ihuenyo. Enwere ike ibudata foto na vidiyo site na ịhọrọ nhọrọ 'tinye mgbasa ozi'. Mgbe ịchekwara ihe ị hụrụ, ịnwere ike ịlaghachi na ngebichi ụlọ n'oge ọ bụla site na ịhọrọ 'ụlọ'.
Kedu onye nwere ike ịnweta akwụkwọ m ji am ụ nwa?
Lọ akwụkwọ nwere ohere ịnweta akwụkwọ agụmakwụkwọ niile nke ụmụaka. Naanị ndị ọzọ nwere ike ịhụ akaụntụ nwa gị ga-abụ onwe gị na onye ọ bụla nke ị ga-eso nkọwa gị na nkọwa, dịka nne na nna ochie wdg. Ọ bụrụ na etinyere nwa gị na otu ìgwè, foto ha nwere ike ịpụta na Akwụkwọ Akụkọ child'smụaka nke ọzọ.
Ọ bụrụ n ’achọghị ka foto nwata gị pụta na akaụntụ onye ọ bụla na-enwetaghị ikike gị biko mee ka anyị mara.
Anyị nwere olile anya na ị na-enwe ọ usingụ site na iji Tapestry yana ọ na - enyere gị aka ịme ka ị mara banyere ihe mmụta nwa gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla na-eji Tapestry biko biko gwa anyị.
Gaa Leta Journalest Online Learning Journal
Budata Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ